Ezona zikhangeli zilungileyo zeWindows | Iindaba zeGajethi
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sishicilele indibaniselwano apho sinokufumana khona ezona brawuza zibalaseleyo ezikhoyo ngoku kwintengiso yeMac.Namhlanje siza kuthetha ngezona zikhangeli zibalaseleyo zifumaneka kwiMicrosoft ecosystem, ngakumbi ezona brawuza zilulungeleyo Windows 10, inguqulelo yamva nje IWindows ziyafumaneka kwintengiso. NjengakwiMacOS, Esona sikhangeli silungileyo sinokufumana iWindows, ngokudityaniswa, yiMicrosoft Edge, isikhangeli esitsha esasungulwa kunye neWindows 10. Okwangoku kwintengiso singafumana inani elikhulu lezikhangeli ezihambelana neWindows, kodwa kweli nqaku siza kuthetha kuphela ngabo banikezela ngokusebenza kunye nokukhetha.
8 Isikhangeli seTotshi
11 Isikhangeli seYandex
Isikhangeli esitsha sikaMicrosoft, efuna ukwenza ukuba i-Intanethi ikhohlwe, khange sifike kwintengiso kunyawo lwasekunene. Ukuqala, kwafika ngaphandle kokusebenzisa izandiso, ukhetho oluze emva konyaka emva kokuphehlelelwa kokuqala okukhulu Windows 10 Ukuhlaziywa kwesikhumbuzo. Okwangoku inani lezandiso ezikhoyo lilinganiselwe kodwa iimfuno ezisisiseko zawo nawuphina umsebenzisi zifezekisiwe.
Ukuba sithetha ngamandla kunye nokusetyenziswa kwememori, iMicrosoft Edge ime ngaphezulu komndilili, ngakumbi ukuba sithetha ngeChannel, isikhangeli esisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi, kodwa ukusebenza kwabo kwiithebhu kubi kakhulu. IMicrosoft ipapasha ngokuthe rhoqo uthelekiso olwahlukileyo nezinye iibrawuza ukubonisa ukuba okwangoku I-Edge sisikhangeli esibonelela ngeyona bhetri isebenzayo kunye nokusebenza.
Enye yeempawu ezifumaneka kuphela kule bhrawuza lukhetho yenza izichazi kumakhasi ewebhu esiwatyelelayo, ukhetho olufanelekileyo kubo bonke abo basebenzisi abanyanzelweyo ukuqaqambisa iinxalenye zombhalo, imifanekiso ... Singawagcina la manqaku ngqo kwisikhangeli okanye singasebenzisa i-OneNote ukuzilawula kamva.
IMicrosoft Edge ifumaneka kuphela kwiWindows, kwaye yakhelwe kwinkqubo yokusebenza. Khuphela iMicrosoft Edge.
Esi sikhangeli sifike kwintengiso kutsha nje kwisandla se-CEO yangaphambili ye-Opera, kwaye kancinci kancinci kuye kwakho ukhetho lokuthatha ingqalelo, ngakumbi ngenxa yesinxibelelanisi esisinikayo, esisibeka kunqakrazo olumbalwa nawuphi na umsebenzi esiwufunayo njengembali, ukhuphelo, ukuthanda. Ikwasivumela ukuba sithintele imifanekiso yamaphepha ewebhu esiwatyelelayo ekulayisheni ukukhawulezisa ukulayishwa okufanayo kwaye ngesahlulo sigcina kwinqanaba lethu ledatha ukuba sidibanisa sisebenzisa isixhobo esiphathwayo.
Ukongeza, ikwasinika indlela entsha yokubonisa iithebhu ezivulekileyo, esivumela ukuba sikhethe apho isikhangeli sizibeka khona. Ujongano lomzobo isinika uyilo oluncinci oluhlengahlengiswe kwiimfuno zakhe nawuphi na umsebenzisi. Zombini isantya ngokubanzi kunye nokusetyenziswa kwezixhobo eziphathwayo zixinene, ngenxa yoko lukhetho lokuthatha ingqalelo ukuba ucinga ngokutshintsha isikhangeli.
Khuphela iVivaldi yeWindows
Isiseko seMozilla besisoloko saziwa ngokuba ngumkhuseli wabucala wabucala, ngokungafaniyo neChannel, esinye sezikhangeli ezifumana ulwazi ngakumbi kubasebenzisi. Unoluhlu olubanzi lwezandiso ukwenza ngokwezifiso ukusebenza kwazo xa ukhangela. IFirefox ikwafumaneka kwi-iOS kunye ne-Android mobile ecosystems, esinokuthi ngayo vumelanisa zombini iibhukumaka kunye nembali kunye neephasiwedi zeenkonzo esizisebenzisayo.
Ukuba sijonga iibhentshi xa kuthelekiswa neChannel kunye neMicrosoft Edge, IFirefox ihlala kwindawo yesithathu, ukuba lukhetho lwesithathu ngokusetyenziswa kunye nokwenza ngcono izixhobo, kodwa ngokunyanisekileyo, andikhange ndibone naluphi na utshintsho oluninzi ekusebenziseni ibhetri yelaptop yam. Ngokuba nomphathi wokukhuphela ozimeleyo, sinokulawula ukhuphelo ngokuzimeleyo ngaphandle kokugcina isikhangeli sivulekile.
Khuphela iFirefox yeWindows
Okwangoku i-Chrome inesabelo esingaphezulu kwama-50% kwinkqubo yokusebenza yeWindows, isabelo esithandwayo kukungakhathalelwa kukaMicrosoft xa usungula iMicrosoft Edge, ukungakhathali okwenze ukuba ifikelele kwintengiso kwinguqulelo yayo yokuqala ngaphandle kwezandiso kunye nokusilela okuninzi okufumaneka kwizikhangeli ezininzi. Kodwa ayisiyiyo yonke impazamo eye yaba yiMicrosoft, kuba uGoogle yeyona injini yokukhangela esetyenziswayo, kuyaqinisekiswa ukuba nawuphi na umsebenzisi ofikelela kwinjini yokukhangela uhlala enokhetho lokulanda kunye nokusebenzisa. Yiza, ithathe ithuba lesikhundla sayo esikhethekileyo ngamafutshane.
Khuphela iGoogle Chrome yeWindows.
Kuze iMicrosoft iyeke ngokusemthethweni ukuxhasa zombini Windows 7 kunye neWindows 8.1, i-Intanethi Explorer izakuqhubeka nokuba sisikhangeli esinezihlaziyo, nangona oko kwasungulwa iMicrosoft Edge, ukusetyenziswa kwayo kuye kwehla kakhulu. I-Internet Explorer ibisoloko ithathwa njengesona sikhangeli sibi embalini, njengoko izama ukusebenzisa gwenxa indawo yayo emarikeni, ngokuzifaka kunye neWindows, kunye ungazikhathazi ukuphucula ukusebenza kwakho unyaka nonyaka.
I-Internet Explorer ifumaneka kuphela kwiWindows, njengeMicrosoft Edge, isithintelo esichaphazele ukhetho lwesi sikhangeli kwamanye amaqonga ukuze isabelo sentengiso sikhule, njengoko bekunjalo ngeChannel. Okwangoku ikwinguqulelo 11, ngenani elikhulu lamachaphaza, kuba ihlala iyenye yeendlela ezisetyenziswa kakhulu ngabagculeli ukuzama ukufikelela kwiikhompyuter ezilawulwa yiWindows.
Ukuya kwinqanaba elithile kunokuqondwa ukuba iApple ifuna ukubonelela ngamava okukhangela kwezinye iinkqubo zokusebenza, kodwa kufuneka ijolise ngakumbi ekuphuculeni ukusebenza kwayo, ukusebenza ngamanye amaxesha kubi kakhulu kunoko sinokukufumana ngeInternet Explorer okanye iTunes. Ukulungiswa kweSafari yeWindows kwiinguqulelo zayo akukho nto, isebenzisa inani elikhulu lezixhobo, nokuba inani leetab esivulekileyo lincinci kakhulu. Ukuba iApple ifuna ukutsala abasebenzisi beWindows ngale brawuza, ininzi ekufuneka iphuculwe.
Ukuba sithetha ngonxibelelwano, iSafari yeWindows isinika ngokufanayo into ebonakalayo ecacileyo nenomdla esinokuyifumana kwiMac. I-Safari isinika inani elilinganiselweyo lezandiso, njengakwinguqulelo ye-macOS. Ukuba ungumthandi weSafari kwaye unekhompyuter enamandla, uya kuba nakho ukonwabela olu hlobo lweWindows. Ukuba oku akunjalo, kungcono ukuhlala kude naye.
Khuphela i-Safari yeWindows
Kwicandelo lesikhangeli, iOpera ibisoloko ingowesine kubambano kwaye ingekuko kuba imbi, kodwa ngenxa yokungahoywa kwabaphuhlisi bayo bangaphambili kunye nokungasisebenzisi kakuhle. Kodwa ekubeni idlulile ezandleni zomanyano lwaseTshayina, I-Opera ibeke iibhetri ukongeza imisebenzi emitsha engafumanekiyo kwezinye iibrawuza ezinje ngethuba lokulawula usetyenziso lomyalezo okhawulezileyo iTelegram, i-WhatsApp kunye neFacebook Messenger kwi-drop-down windows ezisuka ecaleni, ngaphandle kokunikezela ngethebhu ekhethekileyo.
Olu manyano kunye nokusetyenziswa kwemiyalezo kuya kuvela kwisandla senombolo yenguqulo engu-46, kodwa ukuba ufuna ukuzama unokuzikhuphelela ingxelo yonjiniyela kwaye uqale ukuyisebenzisa ngaphandle kwengxaki. NjengoFirefox kunye neChannel, iOpera ikwafumaneka kwiqonga le-iOS kunye ne-Android ukuze sikwazi ngqamanisa iibhukumaki, imbali kunye neephasiwedi ngeefowuni zethu.
Khuphela iOpera yeWindows
Ukuba usebenzisa isikhangeli rhoqo ukusebenzisa umxholo wemultimedia, Isikhangeli seTotshi sisikhangeli sakho njengoko sijolise ikakhulu ekudlaleni nasekukhupheleni kolu hlobo lomxholo. Yintoni egqithisile, idibanisa umphathi wesikhukula, esinokuthi sikuphephe ukufaka isicelo esithile kwezi njongo. Umdlali odityanisiweyo obalaseleyo usivumela ukuba sonwabe ngokukhawuleza kuyo nayiphi na ividiyo esiyikhuphelayo kwi-intanethi, nokuba ikweyiphi na ifomathi ekuyo.
Khuphela iTro Browser yeWindows
Esi sikhangeli siphawuleka ngokusinika ithuba, nokuba yeyiphi na inkqubo esiyisebenzisayo, ukuze sikwazi ukuzimela ngaphandle kwamaphepha amabini ewebhu ngaxeshanye. Idibanisa intengiso kunye ne-pop-up blocker, ethi ngamanye amaxesha isebenze ngakumbi kunokongezwa kweAdBlock. Kwicala lasekunene lesikhangeli, imeko eya isiba ngakumbi kwaye inomdla ngakumbi, Sifumana ukufikelela ngokuthe ngqo kwiintandokazi, uphando oluthile kunye nokuqikelela kwemozulu.
Khuphela iMaxthon yeWindows
Ukuba uneengxaki zabucala xa ukhangela i-intanethi, iTor sisikhangeli sakho. I-Tor isebenzisa iiprotokholi zeVPN zokusebenzisa ii-IPs ezivela kwamanye amazwe, esivumela ukuba sidlule kwiibhloko ezinokubakho, umzekelo kwezinye iividiyo zeYouTube. Ukongeza, inoxanduva lokufihla ukuhamba kwethu ukuze kungabinakho ukulandela amanyathelo ethu. Esi sikhangeli okwangoku ekuphela kwesango ukuba sifuna ukungena kwiWebhu yeWebhu, hayi ukudideka kwi-Web Deep.
Tor isekwe kwiFirefox, kodwa ngaphandle koku, ukusebenza kwayo kuhlala kucotha kunezinye izicelo, kodwa hayi kuba ingaphuhliswanga kakuhle, kodwa ngenxa yokucotha xa ufikelela kumaphepha ewebhu esifuna ukuwatyelela, kuba kuya kufuneka ungene kwiiseva ezininzi ukuze ukwazi fihla nawuphi na umkhondo wotyelelo lwethu. Nangona singayisebenzisa ngaphandle kokufihla i-IP yethu. Kule meko, isantya sokukhangela siphezulu kakhulu kuba ulwazi akufuneki ludlule kumaseva amaninzi.
Khuphela iTro yeWindows
I-Russian enkulu yokukhangela i-Yandex ikwasinika isikhangeli, isikhangeli esigxile kuyo khusela ukukhangela kwethu ngalo lonke ixesha kwizisongelo esinokudibana nazo endleleni njengeentsholongwane, i-malware, i-spyware kunye nokunye. NjengeChannel, iFirefox kunye neOpera, iRussia enkulu yokukhangela, ikwasinika neenguqulelo zezixhobo zethu eziphathwayo, nokuba ziyi-iOS okanye i-Android.
Khuphela iYaxdex yeWindows
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Izikhangeli ezilungileyo zeWindows
UGqirha Fabiàn Castro Rivarola sitsho
NgeFirefox ndibenengxaki ngaphezulu kwexesha eli-1, yeza nokutsala iipopu kwaye yandenza ndalahlekelwa lixesha elininzi lokuzisusa, ndiyeke ukuyisebenzisa; Kodwa ukuba bekungekho ngenxa yeso sizathu, isikhangeli esihle kakhulu Windows 10.
Phendula kuGqirha Fabiàn Castro Rivarola
Ezinye i-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 + zineengxaki "ezibomvu kwesikrini"
IAmazon yehlisa ixabiso lePhepha loNyaka loPapasho noHambo lokuBhiyozela uSuku lweeNcwadi